Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A January 2011 (6)
Q and A January 2011 (6)
1. ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဒီလိုဖြစ်နေတော့ ဆရာဝန်ပြရမှာ အရမ်းရှက်နေလို့ပါ
2. သုတ်တွေဟာ သွေးတွေလို ရဲနေပါတယ်
3. ဝမ်းသွားရင် သွေးပါ ပါနေတတ်လို့ပါ
4. နို့သီးခေါင်းလေး တစ်ခြမ်းက အထဲကို ဝင်နေတယ်
5. ဝှေးစေ့ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အတွင်းဖက်မှာ
6. သမီးချစ်သူ ဖျားနေတာ ၄ ရက်လောက်ရှိပြီ
7. သမီး B ပိုးအကြောင်း မေးချင်လို့ပါ
Jan 21, 2011 at 1:07 PM
ကျွန်တော့် အသက်က ၁၉ ကျော် ၂ဝ အတွင်းမှာပါ။ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ရောဂါပြောရမှာရှက်နေလို့။ ကျွန်တော် ၁၅ နှစ် လောက်ကစပြီး Masturbation လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့ မဆက်ဆံဘူးသေးပါဘူး။ အခု သုတ်လွှတ်တာ အရမ်းမြန် နေလို့ပါ။ တစ်မိနစ်တောင် မကြာပါဘူး။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ သတိပြုမိတဲ့ တစ်ခြား အချက်တွေကတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆိုရင် မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာနိုးရင် ပစ္စည်းကပါ နိုးမှ ကျန်းမာတယ်လို့ ကြာဘူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အင်္ဂါက မနိုးလာပါဘူး။ Masturbation လုပ်တဲ့အချိန် Pornography ကြည့်တဲ့အချိန် ဆိုရင်တော့ တောင့်တင်း လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားသိပ်မရသလို ခံစားရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပြီးတာ အရမ်း မြန်နေတယ်။ အသက်က ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဒီလိုဖြစ်နေတော့ ဆရာဝန်ပြရမှာ အရမ်းရှက်နေလို့ပါ။ ကြောက်လို့ Masturbation တောင် မလုပ်ပဲ ၁လ ကျော်ကျော်လောက် နေဘူးပါတယ်။ လက်ထက်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ရနေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့တွေ့တိုင်း အားငယ်သလို ခံစားနေရတယ်။
အခုပြောပြတာတွေ အားလုံး ရောဂါမဟုတ်ပါ။ (နော်မယ်လ်) ပါဘဲ။ အားငယ်စိတ်ကို တခါထဲ ထုတ်ပြစ်လိုက်ပါ။ မနက် အိပ်ရာထ အင်္ဂါသန်မာတယ်ဆိုတာ မနက်တိုင်း မဟုတ်ပါ။ အဲဒါဖြစ်မှ ကျန်းမာတယ်ဆိုတာ မမှန်ပါ။ (မာစတာဘေးရှင်း) ကြောင့် အိမ်ထောင်ကျရင် အဆင်မပြေမှာ၊ ကလေးမရမှာတွေလဲ လုံးဝ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ Impotency နဲ့ Infertility ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတရား စာရင်းရှည်ထဲမှာ ဒါမပါပါ။
ကျနော့် အသက် ၃၂ နှစ်ပါ။ ပထမဆုံး အကြိမ်မှာ ဆက်ဆံစဉ်က လိင်တံကို တခုခုနဲ့ ထရှမိသလို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ နာတာနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ သုတ်တွေဟာ သွေးတွေလို ရဲနေပါတယ်။ ကျနော်ကြားဖူးတာ မိန်းကလေးတွေမှာပဲ သွေးထွက်တယ်လို့ ကြားဖူးတာပါ။ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ကြောက်သွားမိပါတယ်။ ကွန်ဒုံး သုံးတော့ အဲလို မနာပါဘူး။ သုတ်ကလည်း အဖြူထွက်ပါတယ်။ နောက်တကြိမ်မှာလည်း အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကို မေးကြည့်တော့ ကောင်မလေးက အသစ်မို့ ကျဉ်းလို့ မင်းကလည်း အသစ်မို့ ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ မင်းက အသစ်မို့ ကွန်းသီးခေါင်း ချုပ်စပ်က အလည်ချုပ်ရိုး ပြဲသွားတာလို့ ပြောလို့ ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီ အလည်ချုပ်ရိုးလေး ပြဲသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခုဟာက အဲဒါလေး ပြဲသွားတာက သွေးထွက်တာ နဲနဲလေးပါ။ သုတ်တွေက တကယ့် သွေးတွေလိုပါပဲ နီရဲနေပါတယ်။ သွေးလည်း မဟုတ်ပါ။ သုတ်အဖြူလိုပါပဲ ပျစ်ပျစ်ပါပဲ။ အနီရောင်နဲ့ အဖြူရောင်ပဲ ကွာတာပါ။ ကျနော် နှစ်ကြိမ် အဲလိုဖြစ်ပြီး နောက် မဖြစ်တော့ပါ။ အဲဒါ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ကျနော်က ဖြစ်တာလား ကောင်မလေးက ဖြစ်တာလား ဆိုတာလည်း သိချင်လို့ပါ။
သိပ်မရှင်းလို့ မေးပါအုံးမယ်။ သူများပြောတာ၊ ကိုယ်ထင်တာတွေ ခဏထားပြီး တည့်တည့် ဖြေပေးပါ။
သွေးတွေ့တာနဲ့ နာတာ တွဲနေသလား။ ကွန်ဒွမ် သုံးရင် (၁) မနာသလို (၂) သွေးလဲ မပါဘူးဆိုတာ မှန်လား။
(မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်ရင် သွေးပါဘူးသလား။
“သုတ်တွေက တကယ့်သွေးတွေလိုပါပဲ နီးရဲနေပါတယ်။ သွေးလည်းမဟုတ်ပါ။ သုတ်အဖြူလိုပါပဲ” ပြောတာ ရှေ့-နောက် မညီဖြစ်နေတယ် ထင်တယ်။
မိန်းကလေးက နာတယ်လို့ ခံစားရသလား။
အခု အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်လဲ “Hematospermia သုတ်ထဲသွေးပါ” ကိုသာဖတ်ပါ။
၂၂ နှစ်ပါ။ တခါတလေ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ သွေးပါနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ အစားသောက်နဲ့များ ဆိုင်လား။ ဥပမာ ငရုတ်သီး၊ အစပ် စားထားမိတာမျိူး။ အရင်တစ်ခါ ဝမ်းချူပ်ပြီးထဲက နောက်ပိုင်း ဝမ်းသွားရင် သွေးပါ ပါနေတတ်လို့ပါ။ အန္တရာယ်၊ စိုးရိမ်စရာ ရှိ၊ မရှိကိုလည်း သိလိုပါတယ်။ အမြဲတမ်းဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စဖြစ်တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဝမ်းချူပ်ပြီး ကြွက်သား အညစ်များရာကနေ ဖြစ်တာထင်တယ်။ အသားစသေးသေးလေးလို စမ်းမိတော့ လိပ်ခေါင်းဖြစ်မှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဝမ်းမှန်မှန် သွားရအောင် FIB-Ease oral powder ပေးထားပါတယ်။ အဲဒါသောက်တော့ ဝမ်းတော့ အရမ်း မချူပ်တော့ပါဘူး။ သွေးမပါတာလဲ ၁ လနီးပါးလောက်ရှိပါပြီ။ ဒီနေ့မှ ပြန်ဖြစ်တာပါ။ chilli, tom yum စားမိတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ဝမ်းသွားရင်သွေးပါ နေတတ်တယ်။ တိုက်ဆိုင်တာဘဲလားတော့ မသိပါဘူး။ အနီရောင်ပါ ။ အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ ဗိုက်ထဲက ပူစပ်နေသလိုတော့ နဲနဲ ခံစားရတယ်။ အသားစကတော့ မစမ်းမိပါဘူး။ Overseas ရောက်နေလို့ စိတ်တော့ ပူမိပါတယ်။
• ဝမ်းမှာ သွေးပါစေတဲ့ အကြောင်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ မေးတဲ့သူထင်လာလဲ ပါတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့် နဲနဲပါးပါး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝမ်းချုပ်လို့ ညှစ်ရင်လဲ ပါနိုင်တယ်။ လိပ်ခေါင်းကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီအကြောင်းတွေ ကြောင့်ဆိုရင် သွေးက သွေးစိမ်းရွှင်ရွှင်ဆိုသလို နီရဲနေမယ်။ သွေးအသစ်ဖြစ်တယ်။ သွေးထွက်ထားပြီးသား ဝမ်းထဲပါလာတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အစာအိမ်၊ အူတွေကနေ ထွက်တာဆိုရင် သွေးက ဟောင်းလို့ ညိုမဲ၊ နက် နေနိုင်တယ်။
• ဝမ်းမချုပ်စေရအောင် ရေများများသောက်၊ အသီးအရွက်၊ အသီးအနှံများများစား၊ ဝမ်းချုပ်စေတတ်တဲ့ အဖန်-အခါး လျှော့စား၊ သင်္ဘောသီး၊ မန်ကျီးမှည့်စားပါ၊ ဝမ်းပျော့ဆေးကို လိုတဲ့အခါ သောက်ပါ။ အစပ်-အပူ မတည့်သူဆိုရင် ရှောင်ပါ။ လူတိုင်း မတည့်တာတော့ မဟုတ်ပါ။
• လိပ်ခေါင်း မဖြစ်ရအောင်၊ ဖြစ်ဆိုလဲ တိုးမလာအောင်၊ ဝမ်းဂရုစိုက်ပါ။ ဗိုက်ကို ညှစ်ရတာမျိုး ဆင်ခြင်ပါ။ ချောင်းဆိုး၊ နှာခြေ၊ အလေးအပင်မ၊ ဆောင်ကြောင့်ထိုင်၊ ရှောင်ပါ။
• သွေးယိုတတ်တဲ့လူဖြစ်မှာလဲ စဉ်းစားရမယ်။ တနေရာရာကနေ ခဏခဏဖြစ်သူဆိုရင် သွေးစစ်ပါ။ ဗီတာမင် စီ ၅ဝဝ အား သောက်ပါ။ သွေးအားနည်းနေရင် သံဓါတ်ဆေး-အစာ အားကိုးပါ။ သံဓါတ်က ဝမ်းချုပ်စေတတ်တာ သတိထားပါ။
သမီးက ရန်ကုန်ကပါ။ ဆရာရေးတဲ့ ရင်သားနှိပ်နယ်ခြင်းဆောင်းပါးကို သမီးဖတ်မိတာ မကြာသေးပါဘူး။ ဆရာ့ကို သမီး တစ်ခု မေးချင်လို့ပါ။ သမီး Breast ရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေး တစ်ခြမ်းက အထဲကို ဝင်နေတယ်။ သမီးလဲ ဆရာ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်ပြီးခါမှ ကိုယ့်ဖာသာ သေချာကြည့်မိတာပါ။ ခုလို ဘယ်ချိန်ကတည်းက အထဲကို ဝင်နေတယ် ဆိုတာတော့ သမီးလည်း သတိမထားမိပါဘူး။ သမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါဦး။
• Inverted nipples နို့ပါးစပ် ကို ဖတ်ပါ။
ကျွန်တော်ဟာ (့) နိုင်ငံ (့) ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်သူ လူပျိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဝှေးစေ့ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အတွင်းဖက်မှာ မကျဉ်းစေ့ အရွယ်ခန့် အလုံးကလေးတွေ ပေါ်နေတာ တနှစ်ကျော်ကျော်လောက် ရှိပါပြီ။ နာကျင်မှုလဲ ရှိပါတယ်။ ဘယ်မိန်းမနဲ့မှလဲ မဆက်ဆံဖူးပါဘူး။ အလုပ်က တနေ့ကို ၈ နာရီခန့် လမ်းလျှောက်ရင်း လုပ်ရပါတယ်။ အထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ အချိန်းအချက်လုပ်ခဲ့ပြီး တတ်နှိုင်သလောက် ပြောပြ၊ အလ်ထွာဆောင်း ရိုက်စစ်ပြီးတော့ မင်းရဲ့ ရောဂါဟာ ဝှေးစေ့ရဲ့အတွင်းဖက်သုတ်ရည်လမ်းကြောင်း ဝှေးစေ့ဥကိုငုံ ပတ်ပြီးသွားတဲ့ အကျော ရောင်နေတာပါတဲ့။ ၂ ပတ်လောက် အနားယူခိုင်းပြီး (Ibuprofen) လိုဆေးကိုပဲ သောက်ခိုင်းပါတယ်။ မသက်သာပါဘူး။ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မပြောတတ်တော့ ဘယ်သူ့ကို မေးရမှန်းလဲ မသိပါဘူး။ အဲဒါကျေးဇူးပြု၍ ဘယ်လို ဆေးမျိုးကို သောက်သင့်ပါသလဲ။ ဒီမှာက ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် ဆေးစာမပါရင် ဆေးဝယ်ယူလို့ မရတဲ့အခက်အခဲ လဲရှိပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဝယ်ယူလို့ရနုိုင်ပါသလဲ။ online ကကော မှာယူလို့ရနိုင်ပါသလား။ မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး လူးဆေး သောက်ဆေး ဆိုရင်ကော ဘယ်လို ဆေးမျိုးကို သုံးနှိုင်ပါသလဲ ခင်ဗျား။ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ။
• Varicocele ကို ဖတ်ပါ။
သမီးချစ်သူ ဖျားနေတာ ၄ ရက်လောက်ရှိပြီ။ မိုးနည်းနည်းမိတာရယ် ခံတွင်းအပူများတာရယ် နောက်ပြီး လည်ချောင်း နာရင်းကနေ အဖျားဝင်တာပါ။ အရင်တုန်းကလည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မပူဖူးပါ။ အခုက ကိုယ်တွေ အရမ်းကို ပူပါတယ်။ ပြီးတော့ ချမ်းလဲ အရမ်းချမ်းတတ်ပါတယ်။ နေ့လည်ဆိုရင် အဖျားကျပြီး ညဆိုရင် အဖျား တက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖျားတက်ပြီးတာနဲ့ ချွှေးတွေ တအားထွက်ပါတယ်။ အစာလဲ ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူး။ လည်ပင်းနာတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဆေးခန်းလဲ သွားပြပြီးပြီ။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ ဆေးသောက်ပြီးပြီးချင်းကို တော်တော် သက်သာပါတယ်။ ညပိုင်း ထပ်သောက်ပြီး အိပ်တော့မှ အဖျားတွေ တက်ပြီး အရမ်းချမ်းတုန်နေတာ။ လည်ချောင်း နာတာလဲ ပိုဆိုးလာတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးကတော့ relief pain & fever အတွက် ဆေးရယ် ပြီးတော့ ငုံဆေးရယ် ခံတွင်း သန့်အောင် ငုံပြီး ထွေးထုတ်ရတဲ့အရည်ရယ် Antibiotic လဲ ပေးတယ်။ ဆရာဝန်က ကြက်ဥ ဘဲဥ လိမ်မော်သီး ငှက်ပျောသီး မစားရဘူးတဲ့။ သမီးတို့က (့) မှာပါ။
လူနာ အသက်၊ ကျား-မ၊ ငှက်ဖျားဖြစ်ဘူးလား၊ ငှက်ဖျားဒေသ သွားဘူးလား။ Antibiotic နာမည်။
လူနာ က ၂၇နှစ် ကျား ပါရှင့်။ ငှက်ဖျားဒေသဆိုလို့ ထိုင်း နယ်စပ်တော့ ရောက်ဖူးတယ်။ ငှက်ဖျားတော့မဖြစ်ဖူးပါဘူးရှင့်။
Antibiotic နာမည်က AMOCLA 625MG
Antibiotic Amoxacillin 625 mg သောက်ရင် ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တာ ပျောက်ပါမယ်။
အခုရာသီမှာ ငှက်ဖျားထနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Choloroquine Tablet ၁ဝ ပြားသောက်တာ မမှားနိုင်ပါ။ ဈေးလဲချိုတယ်။ ဝယ်လို့လဲလွယ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမများပါ။ ပဌမနေ့မှာ ၄ လုံးတခါထဲသောက်ပါ။ နောက်ရက် မနက် ၂ လုံး၊ ညနေ ၂ လုံး၊ သောက်ပါ။ နောက်ဆုံး တတိယနေ့မှာ မနက် ၂ လုံးသောက်ပါ။
နာ-ကိုက် စတာတွေအတွက် Pain killer တခုခုသောက်ပါ။ ချမ်းတာအတွက် လိုအပ်ရင် Avil, Burmeton, Citrizine, Antihistamine တခုခုသာ သောက်ပါ။ ကျန်းတာတွေ အဖျားကျတာနဲ့ ပြန်ကောင်းပါမယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာ။ ဒီနေ့ညနေပဲ ဆေးသွားဝယ်လိုက်ပါ့မယ်။
Jan 18, 2011 at 1:05 PM
သမီး B ပိုးအကြောင်း မေးချင်လို့ပါ။ လူတယောက်ဟာ ဆေးစစ်တဲ့ အချိန်မှာလဲ ဘာပိုးမှ မရှိဘူး။ ပြီးတော့ B ပိုး ကာကွယ်ဆေးလဲ ထိုးထားရင် ပိုးဟာ အလွယ်တကူ ဝင်နိုင်ပါသလား။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ သိချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရော ကူးစက် ခံရနိင်ပါသလဲကိုလည်း ဖြေကြားပေးပါ။
• Hepatitis B ဘီပိုးအကြောင်း သိသင့်တဲ့ အချက် ၁ဝ ချက်
• Hepatitis B ဘီ ပိုး တွေကို ဖတ်ပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 1:04 PM